Puntland News | Author Archives
Home » Entries posted by Wararka
Entries posted by Wararka
DEG DEG:Xildhibaano ka tirsan Gollaha Baarlamaanka oo gudoomiye Jawaari ugu baaqay inuu is casilo & Muqdisho oo….
Kulan ay xildhibaano ka tirsan Golaha shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ku yeesheen Villa Hargeysa ayaa waxaa ay gudoomiyaha Golaha shacabka Prof Jawaari ka dalbadeen inuu is casilo. xildhibaanada ayaa ahaa kuwa mooshinka ka keenay Jawaari waxaana ay shirkooda kaga hadlayeen meesha uu marayo mooshinka ay gudbiyeen iyagoo qaarkood dalbaday inuu iscasilo kahor inta aan cod loo […]
WAR DEG DEG AH:Dowladd caan ah oo lacagtii ugu badnayd ku bixinaysa Mooshinka RW Khayre & Xildhibaan Cumar C/rashiid Cali Sharmaake oo….
Wararka haatan soo gaadhaya Warsidaha Puntlandnews.net ayaa tibaaxaya in caasimada Soomaaliya magaalada Muqdisho uu kusoo jeedo Senator Cumar Cabdirashiid oo la filayo in uu biri kasoo dego magaalada Muqdisho isagoo kasoo amba baxay dalka Imaaraadka Carabta. Ilo wareedyo xog-ogaal ahna waxay sheegayaan inuu wado lacag garaysa illaa 3milyan oo Dollar oo uu rabo inuu ku […]
Daawo Video:Shacabka Muqdisho si yaab leh uga hadlay khilaafka madaxda Qaranka & Maxay ka yiraahdeen Mooshinkii…….
Shacabka caasimada soomaaliya muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay siday u arkaan khilaafka ka dhex aloosan madaxda qaranka soomaaliya gaar ahaan Jawaari khayre iyo barlamaanka Soomaaliya. Dadweynaha Ayaa ku tilmaamay nasiib daro inay xukumadii ay u han weynaaayen ay dib u soo caliso marxalado la filaayay in laga gudbay oo ah mooshin iyo is qabqabsi. HALKAN […]
DEG DEG:Dowladda Ethiopia oo warkii ugu cuslaa kasoo saartay Heshiiskii Dekadda Ber-Bera & Madaxweyne Farmaajo oo…..
Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Itoobiya laguna magacaabo Milsi Alam ayaa sheegay in heshiiska ay wada saxiixdeen itoobiay iyo Somaliland kuna saabsan dekadda berbera uusan xiriir la laheyn xaaladda Siyaasadeed ee Soomaaliya. Milsi ayaa hoosta ka xariiqay in Itoobiya ay taageereyso Soomaaliya iyo Madax-banaanideeda!. Afhayeenka oo wereysi gaar ah Al-Jazeera ku siiyay xarunta […]
DEG DEG:Jiidaha hore ee Deegaanka Tukaraq oo lagu kala baxay & Dagaalkii ugu cuslaa oo Ciidamada Puntland Iyo Somaliland ka dhex……
Wararka Warsidaha Puntlandnews.net uu haatan ka helayo jiidaha hore ee deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in ciidamadii ugu badnaa ee Puntland maanta lasoo dhoobay jiidaha hore ee deegaankaasi Tukaraq. Ciidamadani oo ka kala yimid deegaano hor leh oo ka tirsan Puntland iyo kuwii hore ee ku sugnaa deegaankaasi ayaa la sheegay in heegaan […]
DEG DEG:Dowladd caan ah oo go’aan aan laga fileyn kasoo saartay Aadaanka Salaada & Muslimiinta Dalkaasi oo…..
Dowladda Rwanda ayaa ka mamnuucday dhammaan masaajiddada inay isticmaalaan cod baahiyeyaasha dhawaqa dheer xilliga aadaanka salaadaha, iyadoo sheegtay in arrintaasi ay dhibaato ku tahay dadka ka ag dhow. Sarkaal ka tirsan ururka Muslimiinta dalkaasi ayaa mamnuuciddaasi cambaareeyay isagoo sheegay inay wanaagsanaan lahayd in la isku raaco yareynta dhawaqa, isla markaana cod baahiyeyaasha la isticmaalo muddo […]
DEG DEG:Mooshinkii laga keenay Gudoomiye Jawaari oo waji kale yeeshay & RW Khayre oo Xildhibaanada Baarlamaanku ku dhagan yihiin kadib markii……
Guddoonka Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa laba qeybood u kala jabay kadib mooshin kalsooni kala noqosho oo saaka ay xildhibaanno ka badan 100 ka gudbiyeen guddoomiyaha golaha Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari). Guddoomiyaha Baarlamaanka ee mooshinku ka yaallo, guddoomiye ku xigeenka labaad iyo guddiga joogtada ah oo intooda badan uu soo xulay guddoomiye Jawaari ayaa […]
DEG DE+XOG:Dowladda Ethiopia oo bilowday qorshe lagu khal khalinayo Dowladda Farmaajo & Hirgelinta qorshahani oo ay qayb ka yihiin Axmed Madoobe, C/weli Gaas Iyo…….
Dowladda Itoobiya ayaa billowday qorshe ay ku dooneyso in ay isaga hor keento qaar kamid maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda dhexe kadib markii Baarlamanka Soomaaliya uu laalay heshiisyada shirkadda DP World oo qayb ahaan Itoobiya faa’iido ku qabtay. General Gabre oo kamid ah masuuliyiinta Itoobiya ee saamaynta ku leh arimaha Soomaaliya kana tirsan saraakiisha IGAD […]
War deg deg oo hada naga soo gaaray deegaanka Gal-Gala & Ciidamada Puntland+Dhimashada oo maraysa Saddex askari oo ka tirsan ciidamada Puntland kadib markii…..
Warar dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan Qarax lala eegtay gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan Puntland. Qaraxa oo ka dhashay khasaaro kala duwan ayaa waxaa ciidamada lagula eegtay wadada gasha deegaanka Galgala ee gobolka Bari oo ay isticmaalaan Ciidamada Puntland. Inta la xaqiijiyay Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay illaa Saddex Askari oo […]
DEG DEG:(Daawo)Xildhibaano ku dhawaaqay in Jawaari uusan aheyn Gudoomiyaha Barlamaanka & Arin cusub oo Muqdisho……
Xildhibaanadii Mooshinka ka gudbiyay Gudoomiye Jawaari ayaa caawa soo saaray war cusub oo ku aadan qaabkii loo fashiliyay mooshinkii ay gudbiyeen. Xubnaha Xildhibaanadaas ayaa sheegay in gudoomiye Jawaari uu afduubay xildhibaanada dowlada sidaas darteed uu isku bad baadiyay. Waxaa ay xildhibaanadan sheegeen in Jawaari uusan ahaan doonin gudoomiyaha baarlamaanka inta sharciga loo hogaansamayo oo dooda […]
DEG DEG:(Daawo)Muuse Biixi oo lagu bah dilay Dalka Imaaraadka Carabta & Soo dhoweyntii ugu xumayd oo uu kala kulmay kadib markii….
DEG DEG+XOG:Madaxtooyada Somalia oo gashay Jawi aad u mashquul badan & Xildhibaano hal arrin u buux dhaafiyey…..
Wararka naga soo gaaray Xarunta Villa Somalia ayaa sheegay in halkaa uu ka jiro Jawi aad u mashquul badan, waxaana ku sugan Xildhibaano aad u farabadan. Jawiga Mashquulka badan ayaa la sheegay inuu sabab u yahay Mooshin ay Xildhibaanada baarlamaanka Somalia ka gudbiyeen Guddoomiyaha Baarlamaanka Somalia Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Xildhibaanada Jawiga mashquulka badan galiyay Villa Somalia ayaa ku kala sugan Xafiisyada Madaxweynaha iyo […]
Wararka Warsidaha Puntlandnews.net uu xiligani ka helayo degmada Boocame ee gobolka Sool oo dhacda duleedka magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa sheegaya in Cisbitaal deg deg ah loola cararay saddex haween ah kadib markii ay isticmaaleen sun ay ku nadiifanayeen Musqul amaba Suuli guri. Haweenkani ayaa suntani oo ah kuwa lagu nadiifiyo Suuliyaasha u isticmaalayey […]
DEG DEG:Muuse Biixi oo looga yeedhay dalka Imaaraadka Carabta & Heshiiskii DP World oo qarka u saaran in uu bur buro + Farmaajo oo isna ku wajahan…..
Wararka Warsidaha Puntlandnews.net uu haatan ka helayo magaalada Hargeysa ee caasimada maamulka Somaliland ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu goor dhow u duuli doono dalka Imaaraadka Carabta. Ujeedka safarka Mr. Biixi ayaa salka ku haya xiisado culus oo ka dhex aloosan dhinacyada Imaaraadka Carabta iyo dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii is […]
DEG DEG:Ciidamada Somaliland oo qabsan raba deegaano hor leh oo dhaca duleedka Garoowe & Gaadiidkii dagaal ee ugu badnaa oo Jiidaha hore ee deegaanka…..
Wararka Warsidaha Puntlandnews.net uu haatan ka helayo jiidaha hore ee dagaalka deegaanka Tukaraq ayaa sheegaya in ciidamada ugu badnaa ee maamulka Somaliland ay maanta fooda saareen dhanka deegaanka Carooley oo hoostaga degmada Taleex ee gobolka Sool oo 60 KM u jirta magaalada Garoowe ee caasimada Puntland. Ujeedka ciidamadani ayaa lagu sheegay in ay xoojin doonaan […]
DEG DEG:(Daawo Video) Madaxweynaha Labaad ee Somaliland oo ku dhawaaqay warkii ugu cuslaa & Baarlamaanka Somalia oo uu ku taageeray……
Madaxweynaha labaad ee maamulka Somaliland Mustafe Maxamed Martinaya oo dalka Maraykanka dabayaaqadii sanadkii hore kaga dhawaaqay maamulka United Somaliland Front ayaa ugu horeyn uga mahad celiyey Madaxwayne Farmaajo, isgaoona sheegay inuu soo celiyey hantidii Ummada Soomaaliyeed oo ay kamid tahay hawadii Soomaaliya. HALKAN RIIX OO KA DAAWO MUUQAALKA Sidoo kale waxa uu taageeray go’aankii Baarlamaanka […]
Qaar kamid ah dad weynaha ku dhaqan magaalada Borama ee caasimada Gobolka Awdal ayaa si ay ka muuqato Dulinimo iyo Baqdin uga jadlay heshiiska been abuurka ahaa ee dhex maray Beesha Isaaq iyo Shirkada DP WORLD kaas o Beesha Isaaq Soomaali nacayb aawadeed ay ugu wareejisay Dekeda Ber-Bera Shirkad yar oo uu leeyahay nin Dhalasho […]
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa bilaabay in uu fuliyo balan qaad uu horey u sameeyay oo aheyd in uu xiliyada qaar ku shaqeyn doono Xarunta Wasaarada Gaashaandhiga oo kutaala Laamiga Warshadaha. Madaxweyne Farmaajo ayaa bilaabay in isbuuciiba dhoor mar uu tago xarunta Wasaarada Gaashaandhiga Soomaaliya si uu ula socdo howlaha Wasaarada iyo […]
Xog haya Arrimaha Dibadda Mareykanka Rex Tillerso oo booqasho ku maraya qaar ka mid ah wadamada Afrika ayaa Howl galka Midow Africa ee AMISOM ee ay ka wadaan Soomaaliya ku aamanay dagaalka ay kula jiraan Al-shabaab iyo dadaaladooda Xasilinta Soomaaliya. Xog haye Tillerson ayaa balan qaaday in Dowladiisu ay la shaqeeyneeyso Midowga Africa si Al-shabaab […]
Xildhibaanada aqalka hoose ee Barlamanka Federaalka Soomaaliya ayaa wada mooshin ka dhan ah Guddoomiye Maxamad Cismaan Jawaari kaasoo ay ku eedayaan qodobo badan oo ka dhan ah. Warar lagu kalsoon yahay oo laga heley Xildhibaano ka tirsan aqalkaan ayaa sheegaya in tirada mudanyaasha saxiixey mooshinkaan ay ilaa hadda mareyso 140 xubnood kuwasoo filaya in maanta […]
DEG DEG:(Daawo)Magaalooyinka waa weyn ee Somaliland oo ay ka bilowdeen Dibadbaxyo Gil-Gilay Maamulka Muuse Biixi loogana soo horjeedo go’aankii…
Dibadbaxyo xoogan ayaa kabilowday qeybo katirsan degaanada somaliland kasoo lagu tageraayo heshiiskii sadex geesoodka ahaa ee wada galayn somaliland iyo itoobiya iyo shirkada DP World loogana soo horjeydo go aankii barlmaanka soomaaliya. Dibadbaxayaasha ayaa cod dheer ku qeylinaaye ayagoo ruxaayo sawiro muujinaayo heshiiskii waxayna sheegeen in kasoo horjeydaan go aankii maanta kasoo baxay xildhibaanada barlmaaanka […]
DEG DEG:(Dhagayso)Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Puntland oo meel adag ka istaagay Heshiishkii DP World & Go’aankii Barlamaanka Somalia oo…..
Mudanayaal ka tirsan Baarlamaanka dowladda Puntland ayaa si weyn u soo dhoweeyey go’aankii Baarlamaanka dowladda Soomaaliya ay ugu soo saareen kuna saxeexeen xeerka cusub ee dalka looga mamnoocayo shirkadda DP World. Xildhibaan Burhaan Aadan Aw Cabdi oo kamid ah Gollaha wakiilada Puntland oo waraysi gaar ah siiyey Idaacadda Radio Daljir ayaa sheegay in uu sax […]
Ra’iisal wasaaraha Xukuumada Somalia Xasan Cali Khayre ayaa mar kale ka hadlay fara gelinta ay dowladda Imaaraadka Carabta ku hayso dowlada Somalia iyo dhulkeeda. Khayre ayaa sheegay in xukuumadiisa ay dadaal lixaad leh ku bixinayso sida lagu laali lahaa Heshiiska dhex maray Shirkada DP World iyo maamulka Somaliland ee ku salaysan Dekadda magaalada Ber-Bera. Waxa […]
DEG DEG:Dagaal jilbaha la isku aastay oo ka dhacay duleedka Caasimada maamul goboleed caan ah & Ciidamo ka tirsan…..
Wararka ka imaanaya dagmada Mahaday ee gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in dhaq dhaqaaq ciidan uu ka jiro Degmadaasi ka dib markii ay ku dagaalameen ciidamo kawada tirsan Dowlada. Ciidamo ka tirsan Booliska Hirshabeele iyo ciidamado Meliteri ah oo ku sugan dagmada ayaa isku rasaaseeyay sida ay noo xaqiijiyeen dad ku sugan Degmada Mahaday ee Gobolka […]
DEG DEG:Madaxweynaha dalka Ruushka oo amray in dhulka lasoo rido diyaarad ay saarnaayeen 110 qof oo shacab ah kadib markii….
Madaxweynaha Ruushka Vladamir Putin ayaa sheegay in uu isaga shaqsiyan amray in lasoo rido diyaarad shacab ah sanadkii 2014-kii, maadaamaa ay wadday bam lagu qarxin lahaa ciyaarihii olimbikada magaalada Sochi ee dalkaasi ka dhacayay. Filim soconaya muddo 2 saacadood ah oo Putin laga duubay, lana soo dhigay Internetka ayuu ku sheegay in lagu wargaliyay in […]
DEG DEG:Wararkii ugu dambeeyey jiidaha hore ee dagaalka Tukaraq & Ciidamada Somaliland Iyo Puntland oo madaafiicda goobta dagaalka……
Cabsi xoogan ayaa soo food saartay dadka deegaanka Tukaraq iyo deegaanada dhaca laamiga gobolka Sool kadib markii 24-kii saac ee lasoo dhaafay laga dareemayey deegaanka Tukaraq dhaq dhaqaaq ciidan oo cusub ayna wadaan ciidamada Puntland oo kaashanaya kuwa deegaanka. Dadka rayidka ah ayaa ka cabsi qaba in lagu kor dagaalamo maadaama ciidamada maamulka Somaliland ay isticmaalayaan […]
Daawo:P/Land oo go’aan adag ka qaadatay heshiiskii Dekadda Ber-Bera & Digniina u dirtay Madaxweyne Farmaajo Iyo Hogaamiyaasha Somaliland oo….
Dowladda Puntland ayaa sheegtay in ay taageersan yihiin go’anka ay dowlada dhexe ee Soomaaliya ka qaadatay heshiiska DP World ay kula wareegtay dekadda Ber-Bera. Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland ayaa sheegay in Puntland uu heshiiskaas u aragto mid meel ku dhac u ah jiritaanka umadda iyo dalka Soomaaliya. HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA
DEG DEG:(Daawo)War dunida oo dhan ka yaabiyey oo lasoo sheegay & Cilmi Baadhayaal Maraykanka ah oo daah qaaday…
DEG DEG:(Daawo)War dunida oo dhan ka yaabiyey oo lasoo sheegay & Cilmi Baadhayaal Maraykanka ah oo daah qaaday……
DEG DEG:(Dhagayso)Magaalada Gaalkacyo oo war aan laga fileyn kasoo yeedhay & Ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda oo….
Ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa howlgala magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa xalay howlgallo balaaran xaafadaha magaaladaasi. Hawlgaladan oo ah kuwa lagu xaqiijinayo amniga ayaa waxa ay ciidamadu ku soo qab qabteen rag ka ganacsanayay maandooriyaha nuucyadiisa kala duwan, kuwaas oo lagu wareejiayay ciidamada Booliska ee magaaladaasi Gaalkacyo. Abaanaduulaha ciidanka xoogga ee magaaladaasi […]
DEG DEG:Dhimashada oo hada maraysa 9 Qof & Dhaawaca oo sii kordhaya kadib toogasho ka dhacday xuduuda u dhaxaysa dalalka Somalia, Kenya Iyo….
Wararka naga soo gaaraya degaanka lagu magacaabo Mooyaale ee u dhaxeeya Sohdinta Itoobiya,Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ciidamada dowladda Itoobiya ay ku dileen dad shacab ah. Dadka degaanka Mooyaale ayaa xaqiijiyay in ku dhawaad 9 qof ay toogteen ciidamada Itoobiya ee halkaasi ku sugnaa, kadib markii ay moodeen Jamhadda OLF ee […]